Gudoomiyaha gudiga sare ee midawga qabiilka wayn ee Ciise, mudane maxamed Ugaas Xasan, ayaa ugu baaqay dhamaan bahwaynta mujtamaca ciisaha in ay si xoogleh isugu diyaariyaan doorashada hogaamiyaha beesha (ugaasnimada), oo haatan qabanqaabadeeda si wayn loogu hawlanyahay.
Sarkaal sare oo ka tirsan gudiga sare ee bahwaynta Ciise oo SOMALITALK GERMANY khadka taleefoonka ugu waramayay isagoo jooga magaalada diridhabo waxaa uu sheegay in doorashadu ka dhacayso meel kamida meelaha ay bahwayntu u badantahay deegaan ahaan.
Sarkaalka oo hadalkiisa siiwataa ayaa sheegay in dhamaan xubnaha beesha ee ku kala nool soomaaliya, ethiobia iyo dunida daafaheedaba la ogaysiiyay dhicitaanka shirka iyadoo lagu adkaynaayo ka soo qaybgalkiisa.
Sarkaalkaasi oo SOMALITALK u sharaxayay qaabka dhismaha maamulka bahwaynta CIISE . waxaa marka hore la dooranayaa 12 hogaamiye oo ka wakiil noqonaaya lafaha hoose ee bahwaynta, UGAASKUNA 12 kaasi ayuu talada u goyndoonaa, madaxnna u noqonayaa.
illaa haatan waxay bahwaynta CIISE yeelatay 18 ugaas oo talada u hayay ciisaha illaa 1994 kii. ugaaskii ugu danbeeyay oo 66 sanadood kursiga ugaasnimada hayay, ahaana kii 18aad UGAAS XASSAN waxaa uu ALLE ha u naxariistee geeriyooday bishii augost 29 keedii sideed sanadood ka hor.
waxaa uu sarkaalkaasi sare oo ka tirsan maamulka sare ee bahwayntu u sheegay SOMALITALK GERMAY. inaanay beeshu yeelanin wax ugaas ah wixii ka danbeeyay geeridii ugaaskii 18aad. taasoo buu yiri ay hortaaagnaayeen gudiga qabanqaabada doorashada dhibaatooyin dhowr ah. haatanse buu yiri u dhacaysa si quruxdeeda layaabo.
Faalladii Xagar Yare ee Billada Zenawi GUJI.HALKAN July 27, 2002